China ZG eshukuma feeder kwemveliso kunye Factory | Izixhobo zoLungiso lweChengxin
I-ZG ye-motor vibration feeder luhlobo olutsha lwezixhobo zokutya Xa kuthelekiswa nezinye izixhobo zokondla, inezi zinto zilandelayo:
1. Inezibonelelo zesakhiwo esilula, ukugcinwa okufanelekileyo, ingxolo ephantsi, ukufakwa ngokulula, ukusebenza okuzinzile, ukuqala ngokukhawuleza kunye nokupaka okuzinzileyo.
2. Ngokusebenzisa intshukumo yemoto yokungcangcazela, imathiriyeli ihamba ngeparabola, ke ukunxiba kwendawo yokutyisa incinci kwaye nobomi benkonzo bonyukile.
3. Ingatshintsha kwaye ivule kwaye ivale ukuhamba kwezinto ngokukhawuleza kwaye iphucule ukuchaneka kokutya okuqinisekileyo.
Umgaqo wokusebenza kunye neempawu zesakhiwo:
ZG feeder ukungcangcazela okuqhutywa luhlobo olutsha lokungcangcazela kweemoto, elenza ukuba umzimba uqhubeke amaxesha ngamaxesha kwaye ngokulandelelana kwicala lokungcangcazela ukuze uqonde ukondla okufanayo kunye nobungakanani. ZG feeder ukungcangcazela kuthotho yenziwe ngetanki yesondlo, imoto yentshukumo, isixhobo sokudambisa kunye namanye amalungu.
Inkcazo yomzobo wesalathiso:
Ubungakanani besondlo mm
I-2.0 * 2
Egqithileyo K uthotho lokuphindaphinda kumxhasi wamalahle
Okulandelayo: Cone isityumzi
Umxhasi we-Electromagnetic Vibrating feeder
Isihlomelo esiDibeneyo sokuShukuma
Isondli esikhulu seNgcaciso
Umxhasi we-Vibrating feeder
Uhlobo lwentonga oluShukuma uMondli
Uhlobo lwesihlalo uLuhlu lweNgcaciso yoMxhasi
Isixhobo sokuhambisa amalahle
Zg eshukuma uMondli